घर जग्गाको मूल्य दुई गुनाले घट्यो! आनाको कति ? - Tree Media News
बजारमा तरलता अभावभएको भन्दै राष्ट्र बैंकले अनुत्पादक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह नगर्न निर्देशन दिएको राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले जानकारी दिए ।उनका अनुसार सेयर, घरजग्गा र अटो लोनमा कटौती गर्न बैकरलाई निर्देशन दिएका थिए । त्यस लगत्तै नेपाल बैंकर्स संघले अनुत्पादक क्षेत्रका रुपमा चित्रित गरिएको घर जग्गा कर्जा, मार्जिन लेण्डिङ र अटो लोनमा व्यापक कटौती गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता अभाव देखिएसँगै अहिले ठूल्ठुला अपार्टमेन्ट समेत नगदमा खरिद भईरहेका छन् । पछिल्ला प्रोजेक्टहरूमा ७५ प्रतिशतको हाराहारीमा नगद खरिद भएको श्रेष्ठको भनाई छ । तर बैंकहरूले भने राष्ट्रबैंकको निर्देशन अनुसार घरजग्गामा लगानी ठप्पै पारेका छन् ।यो अबधी कम्तिमा २/३ बर्ष नै चल्न सक्ने देखिएको उनको भनाई छ । अहिले अवस्थामा सर्बसाधारण जनतालाई जग्गामा लगानी गरिहाल्नुस् भन्ने अवस्था पनि छैन । पछिल्लो समयमा जग्गाको मूल्यमा पनि असर परेको उनले बताए ।
अहिले जग्गाको मूल्य २ गुना घट्न थालिसकेको छ । पहिले रियलस्टेटको कर्जामा सिमा तोक्दा मन्दि आयो । पछि मन्दिको असर सकिनै लाग्दा भूकम्प आयो र त्यसले पनि हाउजिङ र अपार्टमेन्टबारे नकारात्मक असर ग¥यो ।पछि पुननिर्माण गरेर बेच्ने बेलामा कर्जामा कटौती गरियो र ब्याज वृद्धि भयो, यतिबेला घरजग्गा व्यवसाय चरम संकटमा छ’, महासचिव मिनमान श्रेष्ठले भने ।नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघको शहरी विकास समितिका सभापति तथा घर जग्गा व्यवसायी ओमराज भण्डारीले पनि तरलताका नाममा घर जग्गाको ऋणमा कटौती गरिएसँगै व्यवसाय संकट उन्मुख रहेको बताए ।
‘शहरी क्षेत्रमा एक करोड भन्दा कम मूल्यका घर पाइँदैनन्, एक करोडमा घर किन्न आउने मान्छे कसैसँग पनि नगद हुन्न । सबैले बैंकबाट ऋण लिने हो ।बैंकले ऋण नियन्त्रण र व्याज वृद्धि गरेपछि घर बिक्रि घट्छ’, भण्डारीले भने । उनले भूकम्पका कारण थला परेको घर जग्गा व्यवसाय तंग्रिनै लागेका बेला राष्ट्र बैंकको कदमले फेरी धारासायी अवस्थामा पुगेको आरोप लगाए ।
Previous Postसरकारले नै ४२% सम्म बढायो जग्गाको मूल्यांकन : काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुर छोईनसक्नु हुनेPrevious Post
Next Postजि टिभीले ‘जी सिने अवार्ड’ यस वर्ष नेपालमा गर्नेNext Post